UNHCR iyo dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo maanta Nairobi kaga shiraya celinta qaxootiga Soomaalida – Radio Daljir
UNHCR iyo dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo maanta Nairobi kaga shiraya celinta qaxootiga Soomaalida
Nofeembar 10, 2013 2:38 b 0
Nairobi, November 10, 2013 – Wasiiradda arrimaha debeda ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa maanta ku shiraya magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo ay kaga arrinsanayaan arrimaha qaxootiga Soomaalida ee dalkaas jooga oo dhowr jeer la sheegay in la celinayo.
Labbada Wasiir Marwo Fowsiyo iyo Marwo Aamino Jibriil ayaa la sheegay in kulankooda inta badan diirada lagu saarayo celinta qaxootiga, waxaa shirka la filayaa in ay ka qayb-gasho hay?ada qaxootiga aduunka ee UNHCR.
Soomaaliya iyo Kenya midna ma aysan sheegin habka looga wada-hadlayo qaxootiga, balse dadka Soomaalida ah ayaa ?dhegta ku haya natiijada ka soo baxda kulanka labbada wasiir arrimo dibeddeed ee maanta dhacaya.
Kenya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in dadka qaxootiga Soomaalida ah ay qayb ka yihiin falalka amni daro ee ka jira dalkooda, wasiirka amniga Kenya James Olelenko ayaa sheegay in Soomaalida degan Dhadhaab ay kaalin wayn ku leeyihiin qul-qulatooyinka amni daro.
Tan iyo weerarkii westgate, Kenya ayaa bartilmaameedsatay dadka Soomaalida ah ee xeryaha jooga iyo kuwa magaalooyinka intabada.
Dhowrkii habeen ee ina dhaafay waxaa magaalada Nairobi laga qaqabtay boqolaal Soomaali ah oo xilligan ku xiran xabsiyada, dadka xiran ayaa isugu jiray Qaxooti iyo muwaadiniin balse lagu haysto eedayn aan ilaa hadda la shaacin.
Ciidamada maamulka KMG ah ee Jubba oo la wareegay Jaziirada Kudhaa ee Jubbada Hoose (Dhegeyso)
Abu Muscab ?beegsiga madaxda dowladda, shaqadeenna ugu badan ayey noqonaysaa hadda kadib?